कुन बार जन्मेको मान्छेको स्वभाव र भाग्य कस्तो हुन्छ ? जानी राखौ – KarnaliPost Daily
११ बैशाख २०७५, मंगलवार १३:२६ April 24, 2018 by Karnali Post Daily
पुरुष आइतबार जन्मिने मानिस भाग्यशाली हुन्छन् । उनीहरुको आयु पनि लामो हुन्छ । यस्ता ब्यक्ति कम बोल्ने र कला र शिक्षामा अगाडी हुन्छन् । यो बार जन्मिने ब्यक्तिमा धार्मिक आस्था पनि हुन्छ र घर परिवारका सदस्यलाई खुसी राख्न अधिक प्रयास गर्छन् । तर यिनीहरुलाई २० देखि २२ वर्ष सम्म दुःख हुन्छ । स्त्री आइतबार जन्मिने स्त्री दान(पुण्य गर्ने र बलशाली एवं चतुर हुन्छन् ।
छोरालाई कलेजो दान दिने महान बाबुको जीवनमा आधारित ‘जिन्दगी’ सार्वजानिक(भिडियो सहित) जाडो मौसममा लाग्ने रोगबाट बच्ने उपाय के तपाईमा यौनशक्तिको कमि छ ? यौनशक्ति बढाउने यस्ता छन् १० उपाय यी हुन् महिलाको सबैभन्दा संवेदनशील ९ अंग अत्यधिक थकान महसुस हुन्छ ? सावधान ! यस्ता गम्भीर रोगको संकेत हुन सक्छ